Foto Beksissa Radiationni
Ionizing Radiation kan jedhamu Particle yokan Wave energy qabu kan Atom fi Molecule Ionize tolchuu danda'u dha. Kunii immo energy particle yokan wave sunii irratti hunda'a malle lakkofsa particle yokan wave suni irratti hin hunda'u. particle yokan wave kuni waan bayyee ta'e qofaffi ionization geggesu hin danda'u, particle/wave iin suni energy barbachisaa ta'e qabachu qaba. Yoo ionizationiin kuni waan lubbu qabani irratti geggefame ajjesuu yokan immo DNA Cell warra kessatti argamanni hammessu danda'a. Yoo hin ijjesini immo ionizing radiationiin dhallotta yokan ijjolle nama sunii Mutant gochuu danda'a. Fakkeni gossa ionizing radiation kanfa dha - Energetic Beta Particles, Neutrons, Alpha Particles fi energetic Photons (UV fi UV olli). Energyiin ionize gochuffi barbadamu gossa atom yokan molecule irratti hunda'e jijjirama. X-rays fi Gamma Rayiin atom/molecule hunda ionize gochu ni danda'u. Far Ultraviolet, near ultraviolet fi Visible lightiin molecule diqqo ionize gochu danda'u. Microwave fi Radio Waveiin ionize gochu hin-danda'an kanafu Non-Ionizing Radiation jedhamu.
Visible Lightiin waan yerro tokkotti ifuufii moleculonni isanni ionize ta'anni yerro tokkotti jijjiramu. Kanaaf waan iffa kan dhoksuu fayyadamuni barbachisa. Fakkenaffi photographic film fi moleculotta tokko tokko kan Photosynthesis kessatti hirmattan.
Ionizing Radiationiin fayyida bayye qaba, kunis medicine,qo'anno,construction fi kan kan fakkatan kessatti. Yoo sirritti hin fayyadamne ilmee nama irratti rakko gudda fidu danda'a. Bakka fotonni kuni itti argamanitti offi egunii garri dha.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Ionizing_Radiation&oldid=24043" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 16 Adooleessa 2014, sa'aa 16:23 irratti.